WARARKA BARAAWEPOST talaado 16 october 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo u kicitimay Kampala si uu uga qaybgalo shirka madaxda ciidamada booliska ee dalalka bariga Afrika EAPCO
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Dr Shariif Sheekhuna Maye ayaa u kicitimay maanta magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda si uu uga qaybgalo shir sanadeedka ay sannadkiiba mar yeeshaan madaxda ciidamada Booliska ee dalalka bariga Afrika kuwaasoo ku mideysan ururka la magac baxay East African Police Commissioners Organization (EAPCO).
Shirkan ay yeelanayaan madaxda ciidamada Booliska oo furmaya maalinta arbacada ah ee bisha october tahay 17 ayaa waxaa la soo gabagabayn doonaa maalinta jimcaha ee bishu tahay 19ka.
Shirkan ay sannadkiiba mar yeeshaan madaxda ciidamada Booliska ee dalalka Afrika ee ku jira ururkan la magac baxay East African Police Commissioners Organization (EAPCO) ayaa ajandaha looga hadlayo waxaa uu yahay sidii loo horumarin lahaa wadashaqaynta ciidamada Booliska ee dalalka ku jira ururkan iyo weliba horumarinta iyo sare u qaadidda wada shaqaynta ka dhexeysa ciidamada Booliska ee dalalka Bariga Afrika iyo booliska caalamiga ah ee loo yaqaan INTERPOL.
Shirka ay berri sareeyeyaasha ciidamada Booliska ee dalalka ku jira ururka EAPCO yeelanayaan waxaa ka horeeyay shir kale oo maalintii axadda ahayd tariikhduna ahayd 14ka october uga furmay isla magaalada Kampala saraakiisha iyo madaxda qeybaha booliska ee caalamiga ah ee Interpol ee waddamada Bariga afrika.
Ajandayaashii ay diyaariyeen iyo goaamadii ay gaareen saraakiisha madaxda ka ah ciidamada Booliska caalamiga ah ee dalalka ku yaal bariga Afrika ayaa waxaa sidoo kale ka doodi doona madaxda ciidamada booliska ee uu berri shirku u furmayo kuwaasoo ugu dambeyn goaan rasmi ah ka gaari doona isla markaana saxiixi doona wixii heshiisyo ah ee la gaaray.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Dr Shariif Sheekhuna Maye ayaa waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Adan Adde International Airport ku sii sagootiyay saraakiil sare oo ka socotay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Waxaana saraakiishaas ka mid ahaa S/guuto Mukhtaar oo ah ku simaha taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed,S/guuto Wardheere oo ah madaxa hoggaanka tababarada ee ciidanka booliska soomaaliyeed,S/Guuto Bariise oo ah madaxa hoggaanka baarista dambiyada ee CID,G/le Sare Gaalkacayo oo ah taliyaha saldhigga booliska ee garoonka diyaaradaha iyo S/guuto Gaafow oo ah madaxa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha.